ယောကျ်ားလေးနဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် ထားကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း | Radio Veritas Asia
ယောကျ်ားလေးနဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် ထားကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း
ဒီနေ့မှာ ယောကျ်ားလေးနဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် ထားကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းထားကြတယ်ဆိုတာ အသက်အရွယ်မရွှေးပါ။ ၂ နှစ် ၃ နှစ် အရွယ်ကစလို့ အသက် ၆၀၊ ၇၀၊ အရွယ်တွေမှာလည်း သူငယ်ချင်းလိုချင်ကြတာချည်းပဲ။ လူသားတိုင်းမှာ companionship ဆိုတာ လိုချင်ကြတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ရင်တွင်းစကားတွေ၊ သားရေး သမီးရေးကိစ္စတွေမှာ ဆွေးနွေးလို့ ရမယ့် သူ၊ ကိုယ်နဲ့ ရင်ဘတ်ချင်းတူမယ့်သူရှိချင်ကြတာပါ။ တချို့ကျတော့လည်း ချစ်သူ ရည်းစားဖြစ် သွားပြီး ဘဝတစ်ခုတည်ထောင်သွားကြသလို၊ တချို့ကျတော့လည်း ဘဝတစ်သက်လုံး တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက်တွေအဖြစ်နဲ့ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေလို ဆက်နေထိုင်သွားကြတာတွေလည်း ရှိပါ တယ်။
အခု ကျွန်မတင်ပြချင်တာက မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူ့ boyfriend နဲ့ သူက အတူတူ ရှိနေချိန် ခံစားချက်လေးတွေပါ။
သူက ဒီ boyfriend နဲ့ အတူသွား အတူလာကြည့်အချိန်ဆိုရင် သူ့နှလုံးခုန်သံက အပြေးပြိုင်ပွဲ တစ်ခု ဝင်ပြိုင်ရသလို သူခံစားရတယ်။ ဒါက သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်သေးတယ်။ ချစ်သူတွေ မဖြစ်သေးပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ဒီ girlfriend နဲ့ သူ့ boyfriend တို့က အချင်းချင်း အကျွမ်းတဝင်ရှိကြတယ်။ မိသင်္ဂဟာ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါက သူငယ်ချင်းအဖြစ် ဆက်ဖြစ်နိုင်သေးလား။ ကျွန်မ အထင် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတာကတော့ အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားနိုင်သလို ရိုးရိုးသူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့လည်း ဆက်တည်ရှိ သွားနိုင်တာပါပဲ။
အခု ဒီမိန်းကလေးက သူ့ကိုယ်သူ ပြန်မေးတယ်။ သူငယ်ချင်းပဲလား? ချစ်သူ သူငယ်ချင်း လား?
ဒီမိန်းကလေးက အခုလို စဉ်းစားတယ်။ ငါက ဒီ boyfriend ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို နှစ်သက် တယ်။ သူ့ရဲ့နှလုံးသားက နူးညံ့တယ်။ စိတ်သဘောကောင်းတယ်။ တခြားသူငယ်ချင်းတွေက ပြောကြတယ်။ ဒီ boyfriend က တခြားမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှ မရှိဖူးဘူး။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရင် အေးတိအေးစက်ကြီးလို့ ပြောကြတယ်။ ဒါဆိုရင် ငါ့ကိုကျတော့ မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်လို ထင်မှတ်ထားတယ်။ ငါ့ကို တခြားသူတွေထက် ချွင်းချက်အဖြစ် ဆက်ဆံနေတာနဲ့ တူတယ်။
ငါ ဒီ boyfriend ကို မြင်တွေ့ရတာ စိတ်ထဲမှာ ပျော်နေတယ်။ သူ့ရုပ်ရည်ကလည်း ငါကြိုက် တဲ့ပုံစံမျိုး။ သူဝတ်စားပုံကလည်း ငါ့အတွေးထဲမှာ ခဏခဏပေါ်လာတယ်။ ယုတ္တိရှိရဲ့လား ငါသူ့ကို အမျိုးသားတစ်ယောက်လို မြင်နေတာပါလား။
ငါ့ boyfriend နားမှာ ရှိနေရင် ငါ့စိတ်ထဲ လုံးလုံးလျားလျား ပြည့်စုံနေတယ်လို့ ခံစားမိနေ တယ်။ သူ့အပြုအမူအဆိုးအကောင်းတွေကိုလည်း မြင်နေရတယ်။ ငါ့ကိုလည်း ဝမ်းနည်းစရာဆိုရင် ငိုပြီး ပြောလေ့ရှိတယ်။ သူ ငါ့ကို သူ့လက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်နေတာလား။ ငါဘယ်လိုပဲ အမြင် ကတ်လောက်အောင် ပြုမူနေထိုင်လည်း သူ့အတွက် ဘာမှ မပြသလိုဘဲ တခြားသူငယ်ချင်းဆို ဒီလို အမြင်ကြည်လင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါ့စိတ်ထဲမှာ ငါ့ဘေးမှာ guard သက်တော်စောင့်တစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ပဲ သတ်မှတ်ထားသေးတာ။
ဒီမိန်းကလေးက သူ့ကိုယ်သူလည်း ပြန်စဉ်းစားတယ်။ ဒီ boyfriend က ပထမလူ မဟုတ် ဘူး။ ကိုယ်ပြောသမျှ အကြောင်းအရာတွေ ကိုယ့်ဒေါသတွေကို လက်ခံပေးပြီး ငါ့ဆီကို လာနေပါ လား။ ကိုယ်မှားနေရင်လည်း လက်ညှိုးထိုးပြီး ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး။ မှန်တယ်ဆိုပြီး လက်ခံပေး တဲ့သူဖြစ်နေတယ်။ ဒီတချက်တည်းနဲ့တင် သူ့စိတ်နေစိတ်ထားကို သိရပြီး Eng စကားပုံတစ်ခု ရှိပါ တယ်။ “Don’t let the spark die out takeachance” လို့ ဆိုပါတယ်။ အခါအခွင့်သင့်တုန်း လက်ခံ လိုက်ပါ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
မိန်းကလေးတွေဆိုတာ romantic စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ကြတယ်။ girlfriend ဆိုတာ companionship ဖြစ်ချင်ကြလို့။ ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကို ဦးတည်သွားနေတဲ့ mindset တွေ တူတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး အတွင်းနှလုံးသားတွေ နွေးထွေးပြီး တဦးပေါ် တစ်ဦး သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ဆက်ဆံကြမယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်သဘောထားရှိတဲ့သူတွေရဲ့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်ရဲ့ အတွင်း စိတ်သဏ္ဍာန်တွေ ဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး အပြန်အလှန် respect ပေးကြရင် အခြေခံက ခိုင်မြဲသွားပြီး၊ ဘဝတစ်သက်စာ သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် သူငယ်ချင်းချင်း ချစ်သူတွေအဖြစ် လက်တွဲသွားနိုင်မှာပါဆိုတာ တင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။